ပိုလိုလီအိုက - Teles Relay မလုပ်နိုင်ပါ
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ ပိုဇူလိုကမစွမ်းနိုင်
16: 00 ET
နောဧသည် Davis က ESPN
အဓိကလိဂ်ဘောလုံးရာသီတွင်အမှတ်တံဆိပ်လက်မှတ်များပြည့်နှက်နေသောတောင်အမေရိက၏တစ်နှစ်တာကစားသမား Pity Martinez! မက္ကဆီကန်ကြယ်ပွင့် Marco Fabian ! ၏ဆိုက်ရောက် ဇနျ Mitrita ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို 9,1 သို့! နာနီ ! - အမည် Alejandro Pozuelo အဆိုပါရေဒါအောက်မှာချော်။ ၎င်းသည်သူရောက်ရှိလာသည့်အခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရာသီအစတွင်ကြေငြာခဲ့ပြီး 2019 မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး၏တတိယပတ်အထိတိုရွန်တို FC သို့မရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ ၎င်းသည်စပိန်၏အရွယ်အစား၏သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးအလျားငါးပေခုနစ်လက်မသာရှိပြီးအလွယ်တကူမြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် TFC အသင်း၏စိတ်အားထက်သန်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးအလွန်အသုံးစရိတ်အလွန်များသော်လည်း MLS ခေတ်သစ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအဖြစ်အပျက်မရှိခဲ့ပါ။
သို့သော် 2019 ၏ပထမဆုံးကန်ပြီးရှစ်လအကြာတွင် Seattle Sounders ဖြင့်ကစားသမားအမျိုးအစား Pozuelo ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် Xavier Arreaga - တနင်္ဂနွေတွင် MLS ဖလားအတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောကစားသမားဖြစ်သည် (15h00 ET ABC ရုပ်သံပေါ်တွင်နေထိုင်ကြသည် ) .
Pozuelo တိတ်တဆိတ်ရောက်ရှိလာချိန်တွင်သူသည်အစေးကိုမြင်သောအခါချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီးပထမဆုံးပွဲစဉ်ကိုကူညီခဲ့သည် Jozy Altidore နှင့် 4-0 ရမှတ်အပေါ်နှစ်ခုရည်မှန်းချက်များသွင်းယူ။ မတ်လ 29 တွင် BMO Field သည် BMO Field တွင် 25 447 ကြည့်ရှုသူများအား host ည့်ခံခဲ့သည်။ Genk ကပ္ပတိန်ဟောင်းက TFC ပရိသတ်များကိုမေ့သွားသည် Sebastian Giovinco နောက်ပိုင်းတွင်ဆော်ဒီအာရေဗျတွင် Al-Hilal သို့ထွက်ခွာသွားခဲ့သောအီတလီကြယ်ပွင့် အလွန်အများပြည်သူနှင့်အလွန်အငြင်းပွားဖွယ်ကန်ထရိုက်အငြင်းပွားမှု .
စုစုပေါင်း Pozuelo သည် 12 g Oals နှင့် 12 ပုံမှန်ရာသီပွဲစဉ်များတွင်ကူညီပေးခဲ့သည်ကိုရေတွက်ခဲ့သည်။ အဆင့်မြင့်အချက်အလက်များသည် 30 ရည်မှန်းချက်များနှင့်မျှော်မှန်းထားသည့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူအဆင်သင့်မဖြစ်သေးသော်လည်း 17,3e အကောင်းဆုံး MLS ကစားသမားကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန်လုံလောက်သည် americansocceranalysis.com ။ Pozuelo သည်ယခုနှစ် All-Star နှင့် Best XI အသင်းများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးယခုအခါသူ၏ပထမဆုံး MLS ဖလားတွင်သူသည်ရည်မှန်းချက် ၂ ခုနှင့်ရာသီမတိုင်မီသုံးပွဲတွင်အထောက်အကူ ၂ ခုဖြင့်မြှင့်တင်ထားသောပြိုင်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆွမ်ဆီးစီးတီးဒါရိုက်တာဟောင်းမိုက်ကယ်လော်ဒရူသည် Pozuelo သည် Philippe Coutinho နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားပြီးဖြစ်သည် - အကယ်၍ သူသည် TFC သို့မ ၀ င်ပါကယခုနှစ်အစောပိုင်းကအခြားအသင်းတစ်ခု၏ PLAYOFF တွင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ နွေ ဦး တွင် Genk သည် Jupiler Pro League တွင်ပထမနေရာတွင်ရှိသည်။ အဆိုပါကလပ်သည်သူ၏ကပ္ပတိန် PLAYOFF ထဲမှာနေဖို့ချင်တယ်။ ပိုဇွဲလိုသည်တိုရွန်တိုသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အစီအစဉ်ရှိသည်။
တိုရွန်တိုရှိ Alejandro Pozuelo ၏ပထမဆုံးရာသီကို MLS ဖလားဗိုလ်လုပွဲတွင် ဦး ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ဗင်းဆင့် Carchietta-USA TODAY အားကစား
"အလီ [Curtis, တိုရွန်တို FC အထွေထွေမန်နေဂျာ] နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ်၊ သူကစီမံကိန်းအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာအားလုံးကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ ငါတစ်ခါမှမတွေးဖူးဘူး” ဟုသူက ESS ကို MLS ဖလားမတိုင်မီသီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်။ ပြောင်းရွှေ့ဖို့အချိန်တန်ပြီ။ နောက်ထပ်မတောင်းနိုင်တော့ဘူး"
ဒါကြောင့်ရှည်လျားပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့လွှဲပြောင်းငွေလွှဲစာချုပ်များအပြီး အဆိုပါအားကစား Pozuelo သည်သတ်မှတ်ထားသောကစားသမားအဖြစ်4ချီတက်ပွဲကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်စျေးသိပ်မကြီးသော 11,3 ဒေါ်လာဒေါ်လာအပြောင်းအရွှေ့အခကြေးငွေနှင့်စုစုပေါင်း 18,2 သန်းလေးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသည့်တိုင်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး TFC သည် 90 မိနစ်တွင်ချန်ပီယံအဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
- Twellman: Homefield အချက် | Lodeiro သော့ချက်
- MLS ဖလားသို့သွားရန် တိုရွန်တို | ဆီယက်တဲလ်
- 2019 အတွက်ခွဲခြားသတ်မှတ် | လက်မှတ်တွေ
"ဒီနေရာမှာ MLS မှာတန်းတူညီမျှမှုတွေ၊ သူတို့ရဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတဲ့အသင်းတွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီဟာကလိဂ်မှာရှိတဲ့အသင်းတွေအကြားမှာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်မြင်နိုင်ပါတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ "ဒီရာသီမှာ LAFC, Atlanta ဒါမှမဟုတ် New York အသင်းတွေအားလုံးနောက်ဆုံးရမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ Toronto FC နဲ့ Seattle ကိုတွေ့ရမှာပါ။ MLS တွင်အပြိုင်အဆိုင်များမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုများစွာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွင်း 100% သို့မသွားပါကသင်သည်လိဂ်ရှိအခြားမည်သည့်အသင်းကိုမဆိုရှုံးနိမ့်နိုင်သည်။ "
Pozuelo သည်ကနေဒါနှင့် TFC တို့တွင်အိမ်တစ်လုံးတွေ့ရှိခဲ့သည်။ "တိုရွန်တိုကိုကျွန်တော်ရောက်ကတည်းကကလပ်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုသိပြီးဒီနှစ်မှာစုပေါင်းပြီးစုပေါင်းပြီးအားရကျေနပ်မိလို့ကျွန်တော်တိုင်တန်းလို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကို MLS ကြယ်ပွင့်တွေအတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်၊ တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးလူသစ်ဆုအတွက်အကောင်းဆုံး XI အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဖွဲ့ဟာကျနော်တို့ PLAYOFF ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးယခု MLS ဖလားရရှိခဲ့ပါတယ်။
"အခုအချိန်မှာတိုရွန်တို FC နဲ့ကျွန်တော်ထပ်မံတောင်းခံလို့မရပါဘူး" ဟု၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်။
သိပ်မများပါဘူး သူသည်နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကိုမေးနိုင်သည်။ MLS ဖလားတွင်အနိုင်ရခြင်းသည်ပထမဆုံးရာသီအမှတ်ရစရာဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/toronto-fc/story/3984590/alejandro-pozuelo-couldnt-ask-for-more-from-his-debut-season-in-toronto-except-an-mls-cup-win
Sassuolo သည် Serie A တွင် Bologna 3-1 ကိုရိုက်သည်